Huatulco को सुन्दर खाडी | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मेक्सिको, समुद्र तटहरू
मेक्सिको यससँग धेरै अद्भुत गन्तव्यहरू छन् जुन तपाईंलाई इतिहास र संस्कृति मनपर्दछ वा केवल प्रकृतिको आनन्द लिनुहुन्छ। सूर्य र प्याराडिसाइकल समुद्री तटहरूको हिसाबले, यो विश्वको सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू मध्ये एक हो, त्यसैले अर्को गर्मी को बारेमा सोच्दै ... तपाइँ के सोच्नुहुन्छ हुआटुलको खाडी?
मेक्सिकन तटको यस भागमा धेरै खाडीहरू छन् र मुख्य मानिसहरू सान अगस्टन, रिसिस्लो, सान्ता क्रुज, एल अर्गानो, मग्वे, काकालुटा, चाकु, टांगोलुन्डा र कोनेजोस। तिनीहरू coast 35 किलोमिटर तटको किनारमा अवस्थित छन् र सबै तातो र क्रिस्टल पानीले नुहाउँछन्। स्वर्गको लागि यात्रा। वा नौ प्याराडाइसेसमा ...
1 Huatulco को खाडी
2 खरायो खाडी
3 Tangolunda खाडी
4 Chahué बे
5 सान्ता क्रुज बे
6 Maguey बे र द अंग
7 Cacaluta बे
8 चाचाकुअल खाडी
9 Rrisillo खाडी
10 सान अगस्टिन खाडी
Huatulco को खाडी
बे ईतिनीहरू ax 35 किलोमिटरको तटमा Oaxaca राज्यको दक्षिणमा अवस्थित छन्। तिनीहरू सँगै केहि भेला हुन्छन् Vir 36 कुमारी समुद्र तटहरू जहाँ तपाईं सनबेट गर्न सक्नुहुन्छ, पौंडी खेल्न वा हिड्न सक्नुहुन्छ। बालुवा नरम छ, पानी तातो छ र क्रिस्टल स्पष्ट छ र यदि तपाईं स्नोर्कलिंग अभ्यास गर्नुहुन्छ भने तपाईं भित्र लुकेका लुकेका पानीको चमत्कार देख्नुहुनेछ कोरल चट्टान सबैभन्दा उसको बारेमा मेक्सिकन प्रशान्त। कोरलहरू, तर माछा, डल्फिन र कछुए।
मौसम सधैं संगै हुन्छ किनकि यो लगभग उत्तम छ, जब सम्म तपाईं गर्मी को बीचमा जानुहुदैन किनकि यो उत्तेजक तातो छ। त्यसपछि जलवायु अति शीतोष्ण र यो धेरै थोरै वर्षा हुन्छ। यसको पक्षमा अर्को कुरा यो हो यो क्यानकन भन्दा सस्तो गन्तव्य होउदाहरण को लागी। यो किनभने अटलान्टिक र क्यारिबियन तटहरू यूरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नजीक छन्, यसैले बढी पर्यटन आकर्षित गर्दछ।
यदि तपाईं DF मार्फत यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं खाडीहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं या त उडान लिन सक्नुहुन्छ वा उत्तर मध्यबाट लामो दूरीको बस लिन सक्नुहुन्छ। यात्रा १ 13 घण्टा हो। सत्य यो हो तपाईं या त नौ बे यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ वा केहि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं दोस्रो विकल्पको लागि जानुभयो भने, क्लासिक यात्राले सान्टा क्रुज, अर्गानो, मग्वे र काकालुटा छुन्छ। एउटा यात्राले तपाईंलाई यटको वरिपरि लैजान्छ, तपाईं केही समुद्र तटहरूमा जानुहुन्छ, स्नोर्कल र स्वाद माछा र समुद्री खाना सूर्यास्त नभएसम्म। पी
तर हामी केहि खालहरू मा के पाउँछौं ...?
यो समूहको पहिलो खाडी हो र छ दुई किलोमिटर लामो। समुद्री किनारहरू सेता बालुवा हुन्, तिनीहरूसँग धेरै वर्तमान हुँदैन र सामान्यतया पानी तातो छ। चार सानो समुद्र तटहरू यस खाडीमा अवस्थित छन्: समुद्र तट पुन्टा एरिना, कोनेजोस, अरेना र टेजोनकिटो। पछिल्लो सानो छ, यसको छालहरू कम छन् र पानी गहिरो छ। यो एक घनिष्ठ समुद्र तट हो।
Playa Arena बाक्लो बालुवा छ यद्यपि यो अझै सेतो छ र यसको पानी फ़िरोज़ा छन्। यो जंगली जनावरहरू र अधिक वनस्पतिसहित ठूलो समुद्र तट हो। लगभग जंगल बीच। Playa Conejos धेरै सुन्दर छ: राम्रो सेतो बालुवाको क्लासिक पोस्टकार्ड, बारीक भुटेको पिठो जस्ता, र क्रिस्टलीय निलो र हरियो समुद्र। अन्त्यमा, पुन्टा एरिना समुद्री किनार अधिक व्यावसायिक छ र त्यहाँ न त पशुहरू छन् न त वनस्पतिहरू नै छन्, तर थुप्रै खाद्यान्न स्टोरहरू।
यो हो क्षेत्र मा पर्यटन दृश्य को केन्द्रबिन्दु। यहाँ छ शपिंग मल्ल र होटलहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, निजी घरहरू, अपार्टमेन्टहरू। एकाग्रता पाँच बिच: the भेन्चुरा बीच यो शान्त र पन्ना पानीको साथ छ जहाँ मानिसहरूले धेरै पानी खेलहरू अभ्यास गर्छन्।
La टोरनिलो बीच यो राम्रो घाममा बालुवा र को हो मानजानिलो बीच यो धेरै ठूलो छ, धेरै पर्यटक र परिवार संग राम्रो आदर्श हो। को Tangolunda बीचयसको अंशका लागि, यो अघिल्ला सबै भन्दा ठूलो छ, यससँग गहिरो पानी र सिलबोटहरू र व्यक्तिहरू डाइवि। गर्ने अभ्यास गर्दछन्। को स्वादिष्ट कुना उग्र छालहरू छन्।
यो सामान्यत: कम मौसममा पर्याप्त भ्रमण गरिन्छ र यसको शहर Oaxaca को धेरै विशिष्ट छ। छ तीन समुद्री किनार, ला चाकु, ला एस्पेरान्जा र प्लेया तेजन। पछिल्लो खुल्ला समुद्रमा आठ देखि बीस मिटरको गहिराईमा डाइभिंग सुरू गर्न आदर्श हो। पानी, उप-समुद्र वनस्पति को कारण, एक मजबूत हरियो रंग छ।
एस्पेरान्जा बीच मध्यम आकारको छ, हरियो वनस्पति र पानी छ, तरंगहरू शक्तिशाली छन्। खेल प्राय: अभ्यास गरिन्छ, प्राथमिकतामा सर्फ गर्दै। र चाहु बीच बीचमा पर्याप्त फराकिलो समुद्री किनारा हो, सेतो बालुवाका साथ धेरै ग्यास्ट्रोनोमिक स्टल्स र सडक विक्रेताहरू र हरियो र निलो बीच पानी।
सान्ता क्रुज बे
यहाँ पर्यटन क्षेत्र मा जन्म भएको थियो र यसको समुद्री तटहरू चार हुन्: सान्ता क्रुज, यर्बाबुएना, ला डिस्ट्रीब्युसिएन र एस्पेरन्जा। पहिलो मुख्य समुद्री तट हो र यो सुन्दर छ, नरम, तातो सेता बालुवा र फिरोज़ा पानीको साथ। समुद्र शान्त छ र तपाईंले स्लिम् राइडहरू, जेट स्कीहरू, आदि देख्नुहुनेछ। खाडीहरू पार गर्ने धेरै डु boats्गा पनि यहाँबाट छुट्छन्।
येरबाबुएना बीचमा हजारौं सिशेल र शेलहरू छन् र डेलिभरी बीचमा शान्त छालहरू छन् जहाँ ट्या tank्क डाइभिंग प्राय: गरिन्छ।
Maguey बे र द अंग
छोरा दुई बे धेरै एक अर्काको नजिक र दुई समुद्र तटहरू। एल अर्गानो बीचमा निलो पानी र सेतो बालुवा छ। यसमा प्रायः धेरै पर्यटकहरू हुँदैनन् र पानी खेलहरू धेरै मजबूत छैनन्। माउग्वे खाडीको समुद्री किनार शान्त छ किनकि यिनीहरू क्षेत्रको माध्यमबाट सजिलैसँग पहुँच गर्न सजिलो छैन, त्यसैले यो पानीबाट नभई जमिनमा पुग्न सकिन्छ।
यस्तो देखिन्छ कि यसको परिदृश्य वास्तविक स्वर्ग हो। यो एक टापु छ कि समुद्र बचाउँछ र यसैले यो धेरै शान्त बे हो। यो गाह्रो पहुँचको क्षेत्र पनि हो त्यसैले यो प्लेआ सान्ता क्रुजबाट डु boat्गाबाट मात्र पुग्न सकिन्छ।
La काकालुटा बीच यो गहिरो र फुलेको छ त्यसैले यो सर्फिंग वा काइटसर्फिंगको लागि उत्कृष्ट छ। यसको एउटा चट्टानी तल छ त्यसैले तपाईले यसलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। को एरोयो बीच यो सानो छ र बालुवा धेरै मोटो छ र बालुवा भन्दा उनीहरु लगभग मोटे घोंघा जस्तो देखिन्छ। त्यसैले जुत्ता यहाँ हुनु पर्छ।
यो खाडी यो सेट को शान्त एक हो किनभने यससँग धेरै आगन्तुकहरू छैन। कुरा यो हो तपाईं पानीले मात्र त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ ताकि पहुँच सीमित। थप रूपमा, यो Oaxaca को पारिस्थितिक रिजर्व को एक कला बनाउँछ। तपाईं यहाँ छोड्ने डु here्गा सान्ता क्रूज बीचबाट पनि छाडिन्छ।
खाडी समुद्री किनारमा धेरै छालहरू छन् र यो धेरै नराम्रो छ, जुन धेरैका लागि अति फाइदाजनक छ किनकि त्यहाँ केटाकेटीहरू रोइरहेका छैनन् वा सामानहरू बेच्ने मानिसहरू छैनन्। यसको अर्को समुद्र तटहरू ला इण्डिया हो, जुन धेरै शान्त र प्रशस्त वनस्पतिहरू सहितको छ।
स्वामित्व ठीक सेतो बालुवाको एक समुद्र तट। तपाईं पानीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र तपाईं आफ्नो खुट्टामा अलिकता हिंड्न सक्नुहुन्छ किनकि यो गहिराइमा छैन। यदि तपाइँ महान समयहरू हेर्न चाहानुहुन्छ।
सान अगस्टिन खाडी
यो Huatulco को नौ खाडी मध्ये अन्तिम हो र छ सुन्दर कोरल चट्टानको मालिक प्रशान्त मा मेक्सिको को तट बाट। त्यो किन उनले स्नोर्कलिंग र डाइभि दिन को क्रम हो। यसमा दुई समुद्री तटहरू छन्, सेन अगस्टन सेतो चट्टानको साथ एक हो र काकालुटाइलाले डाइभिiving र पौडी खेल्ने अनुमति दिन्छ।
अहिलेसम्म Huatulco को नौ खाडी। यदि तपाईं ती सबैलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो सस्तो छैन, यात्राको लागि साइन अप नगरेको पनि तपाईंलाई ती सबै मार्फत लैजान्छ, तर अन्य प्रस्तावहरू पनि छन् जुन केवल नौ मध्ये सात लाई छुन्छ र खाना समावेश गर्दछ। टुरहरू नौकामा छन्, ठूला डु boats्गाहरू जुन सयौं मानिसहरूलाई बोक्न सक्छन्, त्यसैले यदि तपाईं भीडहरू मन पराउनुहुन्न भने ... टाढा जानुहोस्! अवश्य पनि, तिनीहरूसँग खुला बार छ त्यसैले मलाई थाहा छैन यो खराब हो वा राम्रो हो ...
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » मेक्सिको » हुआटुलकोको सुन्दर खाडी